နှစ်တစ်ရာ သရဲကြီးရဲ့ ဒုက္ခ -
Posted on February 8, 2019 February 8, 2019 Author Sugar Cane	Comment(0)
သရဲကြီး ဘာကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေပါလိမ့်
ကျုပ်ဘဝမှာ ဘယ်တုန်းကမှ ဒီလောက် မခံစားခဲ့ရဖူးဘူး။
ကျုပ်ကို စော်ကားနေသလို ခံစားရတယ်ဗျာ။
ကျုပ် ဒီအိမ်မှာ နေလာတာ ကြာလှပါပြီ။
ကြာဆို နှစ်ပေါင်းတစ်ရာ့ငါးဆယ်နီးပါးပေါ့။ ဒီအိမ်ကြီးသက်တမ်းနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာပဲ ကျုပ်ကိုမွေးတယ်။ ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာပဲ ကျုပ်သေသွားတယ်။ သေတာကလည်း အိမ်ကြီးကိုလာခိုးတဲ့ သူခိုးတွေ သတ်လို့သေခဲ့ရတာ။
ဘာပဲဆိုဆို ဒီအိမ်ကြီးကို ကျုပ်ချစ်တယ်။ ကျုပ်ကလွဲရင် တခြားဘယ်သူမှ လာနေတာမျိုးကို မကြိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ ဒီအိမ်ကြီးပေါ်ရောက်လာသမျှလူအားလုံးကို ခြောက်လှန့်လွှတ်လိုက်တာလေ။ သူတို့လည်း ကြာကြာမနေနိုင်ဘူး။ ပြေးတာပဲ။
ကျုပ်တစ်ယောက်တည်း ဒီအိမ်ကြီးပေါ် မင်းမူလာတာကြာခဲ့ပြီလေ။ ကျုပ်ရဲ့ သားစဉ်မြေးဆက်တွေကတော့ ဒီအိမ်ကြီးကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။ သူတို့ကတော့ မနေဘူးလေ။ သူတို့သာ နေမယ်ဆို ကျုပ်က ကြည်ဖြူပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သူတို့က မြို့ကြီးပြကြီးနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာပဲနေပြီး ဒီအိမ်ကြီးကို လူငှားတွေ ထားတာလေ။ ဒါကိုပဲ ကျုပ်မှာ မကျေနပ်လို့ သူတို့မနေနိုင်အောင် ခြောက်လွှတ်နေတာပေါ့။
Related Article >>> အထာကျကျ သရဲခြောက်ကြမယ်
ဒါပေမဲ့ဗျာ ကျုပ် အစော်ကားခံနေရတယ်။ ဒီကိစ္စဖြစ်ပြီးကတည်းက ရပ်ကွက်ထဲက သရဲတွေက ကျုပ်ကို လှောင်ပြောင်တာ ခံနေရတယ်။
နှစ်တစ်ရာ သက်တမ်းကြာတဲ့ သရဲကြီးဖြစ်ပြီး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကြောက်အောင်မခြောက်နိုင်လို့တဲ့။ ပြောရဦးမယ် အဲ့ဒီကောင်မလေးအကြောင်း .. သူဒီအိမ်ပေါ်ရောက်လာတာကတော့ ငါးလလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။ တခြားသူတွေက ဒီအိမ်ကြီးမှာ သရဲခြောက်တယ်ဆိုတော့ သူက မခိုးမခန့်နဲ့ သရဲဆိုတာ တကယ်မရှိပါဘူး လို့ ပြောသေးတာ။
အဲဒီတုန်းကတော့ ကျုပ်က “နင်တော့ နေနှင့်ဦး သေးဖြန်းဖြန်းကျအောင်ခြောက်လွှတ်မယ်”လို့ တေးထားတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ် တက်တက်စင်အောင် လွဲတာပဲဗျို့။
ကောင်မလေးပြောတာတော့ အဟုတ်ပဲ သူ့အတွက် သရဲဆိုတာ တကယ်မရှိဘူး ဆိုတာလေ။ ဘယ်ရှိမလဲ သူက မြင်မှ မမြင်ရတာ။ ဒင်း မျက်နှာပေါ်က ပုလင်းဖင်လောက်ရှိတဲ့ မျက်မှန်ကြီးမြင်ကတည်းက ကျုပ်သိသင့်ပါတယ်လေ။
သူ့ မျက်မှန်မပါရင် သူက ဘာမှမမြင်ရဘူးဗျ။ ညည ဆို သူက မျက်မှန်ချွတ်ထားတာ။ ဒီတော့ ကျုပ်ဘယ်လောက်ခြောက်ခြောက် သူမမြင်ရဘူးလေ။
သူက သူ့ဟာသူ အမှတ်အသားလုပ်ထားတော့ ည ဆို မျက်မှန်မတပ်ထားလည်း အဆင်ပြေနေတာ။ ညဘက် အိမ်သာသွားလည်း စမ်းစမ်း စမ်းစမ်း နဲ့ သွားနေတာ အဟုတ်။ ကျုပ်က သူ့ရှေ့ ပြူးပြ ပြဲပြ အစွယ်ကြီးတွေထုတ်ပြ လျှာကြီး အလျားလိုက်ထုတ်ပြ အလကားပဲ။
မမြင်ရလို့ အသံနဲ့ ခြောက်ကြည့်ပါသေးတယ်။ လက်အေးကြီးနဲ့ ထိတာ၊ စောင်တွေ ဆွဲချတာ ဘာညာလည်း လုပ်ကြည့်သေးတယ်။ ဒင်းက ကာလနဂါးလောက် နီးနီး အအိပ်ကြီး ပြန်တော့ ဘာသံကြားကြား၊ ဘာလုပ်လုပ် မနိုးဘူးလေ။
အံ့ပါ့ဗျာ.. ဒါလောက် အအိပ်ကြီးတာ မကြုံဖူးပေါင်… ဒင်းတော့ လက်ဖျားခါတယ်။ အခုဆို သူ အိမ်မှာရောက်နေတာ ငါးလ လောက်ရှိသွားပြီ။ ကျုပ် ဘာမှ မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် စော်ကားနေသလို ခံစားရတာပေါ့ဗျာ။
မဖြစ်ဘူး ဒင်းကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ရအောင်ခြောက်ရမယ်။ သရဲ သိက္ခာအကျမခံနိုင်ဘူး။ ကျုပ် နှစ်တစ်ရာသရဲလေ ဂုဏ်ပုဒ်က မနည်းဘူးဗျ…
Related Article >>> သရဲကြောက်တဲ့သူငယ်ချင်းကို သရဲကားကြည့်ဖို့ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ?
တစ်ရက်တော့ အကြံဉာဏ်တစ်ခုရသွားတယ်။ အဲ့ဒီအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ရမယ်။
ညဆယ့်နှစ်နာရီလောက် ရှူးပေါက်ချင်လာတာနဲ့ ထသွားလိုက်တယ်။ ကိစ္စပြီးတော့ စောင်ခြုံထဲ ပြန်ကွေးမလို့ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ မကွေးနိုင်ခင် ဖုန်းမြည်လာတာနဲ့ပဲ ကောက်ကိုင်လိုက်တယ်။ ဘယ်သူခေါ်လဲတော့မသိ မျက်မှန်တပ်မထားတော့ မမြင်ရဘူးလေ။
“မ နေခြည်လားဟင် ကျွန်တော် မင်းသူ ပါ”
ဟယ် တို့ Crush နေတဲ့ လမ်းထဲက ကောင်လေးပါလား။
“အစ်မကို ကျွန်တော် လာတွေ့ချင်လို့ရမလားဟင်။ ပြောစရာလေးရှိလို့ပါ။”
“ဟယ် ဒီအချိန်ကြီး ?”
“ဟုတ် နောက်ကျနေမှန်းသိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေကို ဆက်ပြီးမမြိုသိပ်နိုင်တော့လို့ပါ။ မနေခြည်ကို ကျွန်တော် လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိပါဘူး စိတ်ချပါ။ ကျွန်တော် မိကောင်းဖခင် သားသမီးပါ။”
“ဟုတ် ဟုတ်.. ဒါဆိုလည်း တွေ့တာပေါ့..”
ဝမ်းသာအားရနဲ့ ကျွန်မဖုန်းချလိုက်တယ်။ သူလာမယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးလှအောင်ပြင်ရမှာပေါ့လေ။ စိတ်ကူးနဲ့ မြူးပြီး ကျွန်မ မျက်မှန်တပ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ….
အေးစက်နေတဲ့ လက်ကြီးတစ်ဖက်က ကျွန်မပုခုံးကို လာထိပါရောလား…
ကျွန်မလန့်ပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ …
မျက်လုံးတွေ တွဲလောင်းကျ လျှာကြီးက အရှည်ကြီး နဲ့ အမွေးစုတ်ဖွား သရဲကြီးတစ်ကောင်….
အမလေး အခုမှပဲ ကျုပ်သိက္ခာပြန်ဆယ်လိုက်နိုင်တယ်။ ငတိမတော့ လန့်ဖျားဖျားလို့ ဆေးရုံတင်လိုက်ရသေးတယ်။ အခုတော့ သူ့ပစ္စည်းတွေယူပြီး ပြောင်းပြေးပါပြီ။ အဟဲ ကျုပ်ကို ဒီလို လာစမ်းလို့ ဘယ်ရမလဲ ကျုပ်က နှစ်တစ်ရာ သရဲကြီးလေဗျာ …..
သရဲကွီး ဘာကွောငျ့ ဒုက်ခရောကျနပေါလိမျ့
ကြုပျဘဝမှာ ဘယျတုနျးကမှ ဒီလောကျ မခံစားခဲ့ရဖူးဘူး။
ကြုပျကို စျောကားနသေလို ခံစားရတယျဗြာ။
ကြုပျ ဒီအိမျမှာ နလောတာ ကွာလှပါပွီ။
ကွာဆို နှဈပေါငျးတဈရာ့ငါးဆယျနီးပါးပေါ့။ ဒီအိမျကွီးသကျတမျးနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒီအိမျကွီးပျေါမှာပဲ ကြုပျကိုမှေးတယျ။ ဒီအိမျကွီးပျေါမှာပဲ ကြုပျသသှေားတယျ။ သတောကလညျး အိမျကွီးကိုလာခိုးတဲ့ သူခိုးတှေ သတျလို့သခေဲ့ရတာ။
ဘာပဲဆိုဆို ဒီအိမျကွီးကို ကြုပျခဈြတယျ။ ကြုပျကလှဲရငျ တခွားဘယျသူမှ လာနတောမြိုးကို မကွိုကျဘူး။ ဒါကွောငျ့ပဲ ဒီအိမျကွီးပျေါရောကျလာသမြှလူအားလုံးကို ခွောကျလှနျ့လှတျလိုကျတာလေ။ သူတို့လညျး ကွာကွာမနနေိုငျဘူး။ ပွေးတာပဲ။
ကြုပျတဈယောကျတညျး ဒီအိမျကွီးပျေါ မငျးမူလာတာကွာခဲ့ပွီလေ။ ကြုပျရဲ့ သားစဉျမွေးဆကျတှကေတော့ ဒီအိမျကွီးကို ထိနျးသိမျးထားပါတယျ။ သူတို့ကတော့ မနဘေူးလေ။ သူတို့သာ နမေယျဆို ကြုပျက ကွညျဖွူပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ သူတို့က မွို့ကွီးပွကွီးနဲ့ နိုငျငံခွားမှာပဲနပွေီး ဒီအိမျကွီးကို လူငှားတှေ ထားတာလေ။ ဒါကိုပဲ ကြုပျမှာ မကနြေပျလို့ သူတို့မနနေိုငျအောငျ ခွောကျလှတျနတောပေါ့။
Related Article >>> အထာကကြ သရဲခွောကျကွမယျ
ဒါပမေဲ့ဗြာ ကြုပျ အစျောကားခံနရေတယျ။ ဒီကိစ်စဖွဈပွီးကတညျးက ရပျကှကျထဲက သရဲတှကေ ကြုပျကို လှောငျပွောငျတာ ခံနရေတယျ။
နှဈတဈရာ သကျတမျးကွာတဲ့ သရဲကွီးဖွဈပွီး ကောငျမလေးတဈယောကျကို ကွောကျအောငျမခွောကျနိုငျလို့တဲ့။ ပွောရဦးမယျ အဲ့ဒီကောငျမလေးအကွောငျး .. သူဒီအိမျပျေါရောကျလာတာကတော့ ငါးလလောကျပဲရှိပါသေးတယျ။ တခွားသူတှကေ ဒီအိမျကွီးမှာ သရဲခွောကျတယျဆိုတော့ သူက မခိုးမခနျ့နဲ့ သရဲဆိုတာ တကယျမရှိပါဘူး လို့ ပွောသေးတာ။
အဲဒီတုနျးကတော့ ကြုပျက “နငျတော့ နနှေငျ့ဦး သေးဖွနျးဖွနျးကအြောငျခွောကျလှတျမယျ”လို့ တေးထားတာပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကြုပျ တကျတကျစငျအောငျ လှဲတာပဲဗြို့။
ကောငျမလေးပွောတာတော့ အဟုတျပဲ သူ့အတှကျ သရဲဆိုတာ တကယျမရှိဘူး ဆိုတာလေ။ ဘယျရှိမလဲ သူက မွငျမှ မမွငျရတာ။ ဒငျး မကျြနှာပျေါက ပုလငျးဖငျလောကျရှိတဲ့ မကျြမှနျကွီးမွငျကတညျးက ကြုပျသိသငျ့ပါတယျလေ။
သူ့ မကျြမှနျမပါရငျ သူက ဘာမှမမွငျရဘူးဗြ။ ညည ဆို သူက မကျြမှနျခြှတျထားတာ။ ဒီတော့ ကြုပျဘယျလောကျခွောကျခွောကျ သူမမွငျရဘူးလေ။
သူက သူ့ဟာသူ အမှတျအသားလုပျထားတော့ ည ဆို မကျြမှနျမတပျထားလညျး အဆငျပွနေတော။ ညဘကျ အိမျသာသှားလညျး စမျးစမျး စမျးစမျး နဲ့ သှားနတော အဟုတျ။ ကြုပျက သူ့ရှေ့ ပွူးပွ ပွဲပွ အစှယျကွီးတှထေုတျပွ လြှာကွီး အလြားလိုကျထုတျပွ အလားကားပဲ။
မမွငျရလို့ အသံနဲ့ ခွောကျကွညျ့ပါသေးတယျ။ လကျအေးကွီးနဲ့ ထိတာ၊ စောငျတှေ ဆှဲခတြာ ဘာညာလညျး လုပျကွညျ့သေးတယျ။ ဒငျးက ကာလနဂါးလောကျ နီးနီး အအိပျကွီး ပွနျတော့ ဘာသံကွားကွား၊ ဘာလုပျလုပျ မနိုးဘူးလေ။
အံ့ပါ့ဗြာ ဒါလောကျ အအိပျကွီးတာ မကွုံဖူးပေါငျ… ဒငျးတော့ လကျဖြားခါတယျ။ အခုဆို သူ အိမျမှာရောကျနတော ငါးလ လောကျရှိသှားပွီ။ ကြုပျ ဘာမှ မလုပျနိုငျသေးဘူး။ အဲ့ဒါကွောငျ့ စျောကားနသေလို ခံစားရတာပေါ့ဗြာ။
မဖွဈဘူး ဒငျးကို တနညျးနညျးနဲ့ ရအောငျခွောကျရမယျ။ သရဲ သိက်ခာအကမြခံနိုငျဘူး။ ကြူပျ နှဈတဈရာသရဲလေ ဂုဏျပုဒျက မနညျးဘူးဗြ။
Related Article >>> သရဲကွောကျတဲ့သူငယျခငျြးကို သရဲကားကွညျ့ဖို့ ဘယျလို ဆှဲဆောငျမလဲ?
တဈရကျတော့ အကွံဉာဏျတဈခုရသှားတယျ။ အဲ့ဒီအတိုငျး အကောငျအထညျဖျောရမယျ။
ညဆယျ့နှဈနာရီလောကျ ရှူးပေါကျခငျြလာတာနဲ့ ထသှားလိုကျတယျ။ ကိစ်စပွီးတော့ စောငျခွုံထဲ ပွနျကှေးမလို့ပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ မကှေးနိုငျခငျ ဖုနျးမွညျလာတာနဲ့ပဲ ကောကျကိုငျလိုကျတယျ။ ဘယျသူချေါလဲတော့မသိ မကျြမှနျတပျမထားတော့ မမွငျရဘူးလေ။
“မ နခွေညျလားဟငျ ကြှနျတျော မငျးသူ ပါ”
ဟယျ တို့ Crush နတေဲ့ လမျးထဲက ကောငျလေးပါလား။
“အဈမကို ကြှနျတျော လာတှခေ့ငျြလို့ရမလားဟငျ။ ပွောစရာလေးရှိလို့ပါ။”
“ဟယျ ဒီအခြိနျကွီး ?”
“ဟုတျ နောကျကနြမှေနျးသိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတော့ရငျထဲက ခံစားခကျြတှကေို ဆကျပွီးမမွိုသိပျနိုငျတော့လို့ပါ။ မနခွေညျကို ကြှနျတျော လကျဖြားနဲ့တောငျ မထိပါဘူး စိတျခပြါ။ ကြှနျတျော မိကောငျးဖခငျ သားသမီးပါ။”
“ဟုတျ ဟုတျ.. ဒါဆိုလညျး တှတေ့ာပေါ့..”
ဝမျးသာအားရနဲ့ ကြှနျမဖုနျးခလြိုကျတယျ။ သူလာမယျဆိုတော့ နညျးနညျးပါးပါးလှအောငျပွငျရမှာပေါ့လေ။ စိတျကူးနဲ့ မွူးပွီး ကြှနျမ မကျြမှနျတပျလိုကျတယျ။ အဲဒီအခြိနျမှာပဲ ….
အေးစကျနတေဲ့ လကျကွီးတဈဖကျက ကြှနျမပုခုံးကို လာထိပါရောလား…
ကြှနျမလနျ့ပွီး လှညျ့ကွညျ့လိုကျတော့ …
မကျြလုံးတှေ တှဲလောငျးကြ လြှာကွီးက အရှညျကွီး နဲ့ အမှေးစုတျဖှား သရဲကွီးတဈကောငျ….
အမလေး အခုမှပဲ ကြုပျသိက်ခာပွနျဆယျလိုကျနိုငျတယျ။ ငတိမတော့ လနျ့ဖြားဖြားလို့ ဆေးရုံတငျလိုကျရသေးတယျ။ အခုတော့ သူ့ပစ်စညျးတှယေူပွီး ပွောငျးပွေးပါပွီ။ အဟဲ ကြုပျကို ဒီလို လာစမျးလို့ ဘယျရမလဲ ကြုပျက နှဈတဈရာ သရဲကွီးလဗြော …..
Tagged Friday Horror, Fun, ghost, Horror
Posted on October 26, 2018 October 30, 2018 Author Christina Rosy
Posted on February 8, 2019 Author Aye Mon Kyaw
ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေ… ဖတ်ကြည့်ပါလို့ 😛
Posted on December 27, 2018 Author Sugar Cane
ခေတ်အဆက်ဆက်က သရဲပေါင်းများစွာ ရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးဆိုပါလား
Park Bo Gum နဲ့ Gong Yoo တို့ကို အတူယှဉ်တွဲတွေ့ရမယ့် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် “Seo Bok”